Shiinaha Customized shiraac rucksack-saareyaasha, shirkado, warshad - xigasho - Dongguan Zhihao Boorsadaada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Boorsooyin > Boorsada dhabarka shiraaca > Rucksack canvas
Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2003. Ganacsigeena ugu weyni waa nashqadeynta, soosaarka iyo iibinta alaabada boorsada, sida: boorsooyinka laptop-ka, boorsooyinka iskuulka ardayda, boorsooyinka iskuulka, bacda xafaayada, boorsooyinka dibada, boorsooyinka isboortiga, rucksacks, boorsooyinka iskuulka kartoonada iyo alaabada kale. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale ballaarineynaa ganacsiyada kale, sida soosaarka Naqshadeynta: bacaha suunka, boorsooyinka duffel, boorsooyinka gacanta, boorsooyinka qalabka, boorsooyinka qadada, bacaha qoryaha, boorsooyinka taatikada ee militariga, boorsooyinka xayawaanka iyo waxyaabaha kale. Si loo daboolo baahiyaha shaqsiyeed ee macaamiisha, waxaan sidoo kale dhisnay waax ka caawisa macaamiisha inay helaan qaybaha kale ee badeecadaha ee Shiinaha. Shiinaha dhexdiisa, waxaan leenahay silsilad xoog leh oo qaan gaar ah oo kor u kacsan iyo silsilad saadka oo hoos mara Tani waa faa'iidadayada ugu muhiimsan. Faa'iidadan awgeed, waxaan ugu adeegi karnaa dhammaan macaamiisheenna si dhakhso leh, ka wanaagsan oo ka wanaagsan, oo waxaan u siin karnaa macaamiisheenna adeegyo wax-soo-saar tayo sare leh oo tayo sare leh, waxaan sidoo kale macaamiisha ku siin karnaa badeecooyinkeena noocyada asalka ah oo tayo sare leh. Shaqaalaheena 600 iyo 500 mashiinada wax soo saarka ayaa ah hantida ugu weyn. Sideen u ilaashan karnaa booskeena hogaaminta? Waxaan mudnaan siineynaa isku xirka dadka, waxaana muhiimada koowaad siineynaa ilaalinta xuquuqda aadanaha ee shaqaalaha iyo ilaalinta xuquuqda macaamiisha. Aqoon isweydaarsiga 18,000 mitir murabac ah wuxuu noo ogolaanayaa inaan meel dhigno qalab wax soo saar iyo shaqaale wax soo saar badan, isla markaana aan u siino macaamiisha adeegyo ka imaado naqshadeynta wax soo saarka, soosaarka muunada, soosaarka tirada badan, saadka xamuulka, iyo bayaanka kastamka. Haddii aad u baahato inaad habeyso alaabada boorsadaada ama aad metesho sumadeena, fadlan nala soo xiriir: adamdavis@fofrerbag.com
1. Hordhaca Badeecada Boorsada
Markaad ka iibsaneyso rucksack shiraac cusub suuqa, waa inaad fiiro gaar ah u yeelatid dhowr arrimood. Kuwaas waxaa ugu muhiimsan cimri dherer. Waxaan shandaddeena ku rarnay geesaha cidhiidhiga ah iyo haamaha cidhiidhiga ah ee cidhiidhiga ah, waxaan ku tuurnay sagxadda dhulka, waxaanna buuxinnay alaabtii oo dhan. Bacaha waara ayaa ka muhiimsan qaabeynta iyo sumadeynta. Rakaab kasta waa inuu haystaa boorso lagu kalsoon yahay.
(1) Ruvasack-ka canvasku wuxuu noqon karaa boorsada ugu safashada badan. Waad ku qaadan kartaa safarada dhamaadka usbuuca ama boorso dheeri ah oo loogu talagalay safarka masaafada dheer. Noocyada badan ee boorsooyinka dhabarka ah ee aad ka heli karto, shiraacdu waa xulasho caan ah. Waxay leedahay muuqaal gadaal ah waana shey aad u xoogan oo lagu kalsoonaan karo. Haddii bacda shiraafadu aad u gabowday, way fududahay in la dhaqo.
(2) Boorsadan suufka ah ee 100% ee suufka ah waxaa lagu qalabeeyaa dhejiyeyaal bir ah oo waara, kuwaas oo xoog leh oo raagaya Dharka lagu dhaqo waxay dadka siisaa dareen dib u dhac ah. In kasta oo ay umuuqato xoogaa raganimo ah, haddana waxay aad ugu habboon tahay ragga iyo dumarka.
(3) Waxaa jira meelo badan oo wax lagu keydiyo oo ku yaal banaanka iyo gudaha bacda, oo ay ku jiraan qaybo siibada ah iyo boorsooyin siibanaya Laptop 17-inch ah ayaa sidoo kale lagu rakibi karaa qeybta laptop-ka ee suufan. Afka boorsada waxaa lagu adkeeyay xarig waxaana lagu qalabeeyaa daboolid leh dhejis birlab ah. Qurxinta ayaa lagu dhammeeyaa kalasareynta maqaarka sare ee hadhuudhka.
(4) Faa'iido darrada ugu weyn waa xoojin la'aan. Boorsadu aad ayey u fududahay, laakiin ma jirto wax taageero ah oo ku jirta salka bacda. In kasta oo boorsadu aysan si fudud u jabin doonin, la'aanta barkinta hoose waxay ka dhigan tahay in xasilloonida waxyaabaha gudaha ay liitaan. Buugga adag ama walxaha leh geesaha fiiqan ayaa dalooli kara bacaha dugsiga.
(5) Xaraashka casriga ah iyo boorsada maqaarka, shaashadda laptop-ka qaaska ah oo ku habboon in la dhigo laptop 15.6-inji ah xagga dambe ee qaybta weyn. Qeybta ugu weyn waxaa lagu furaa laba jibaar, taasoo ka dhigeysa mid isku laaban si loo helo marin fudud. Waxaa jira xoogaa baahi maalinle ah, sida dhalada biyaha, dalladda, qalinka iyo warqadda. Iyo jeebka taleefanka qaaska ah ee gudaha hore.
(6) Maalmahan, socdaalayaasha badankood waxay safarkooda ku keenaan laptop ama kumbuyuutar kumbuyuutar ah. In kastoo magaca boorsada ay sheegan karto cabirro ka mid ah qaybaha laptop-ka, had iyo jeer sax maahan. Tixgeli cabbirka laptop-kaaga, haddii kumbuyuutarkaagu ballaaran yahay, waxaad u rogi kartaa cabbir ka weyn.
(7) Kaydinta iyo abaabulka: boorsooyinka qaarkood waa fududahay, boorsooyinka qaar waxay qaadi karaan boorsooyin badan oo aad u baahan tahay. Ujeedada boorsada ayaa ah in si ku habboon alaabada ugu badan dhabarkaaga loo dhigo oo gacmaha laga xoreeyo. Hubso inaad haysato meel aad ku keydiso oo aad si fudud ugu fududaan karto, adigoon u baahnayn inaad wax walba ku lumiso raadinta qalin.
2. Rucksack canvas product parameters (specifications)
Dhererka 30cmX Width 15cmX Dhererka 40cm
3. Astaamaha iyo codsiyada ruvasack shiraac
5. Baakadaha dhabarka ee weelka iyo keenista
(2) Cabirka baakadka ee caadiga ah: dhererka 30cmX width 15cmX height 40cm, waxaan u habeyn karnaa cabirka baakada naqshadeynta iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) Faahfaahinta xirxirida: 45cm X 33m X 50cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
Calaamadaha kulul: Ruvas rucksack, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka